Coral Reef: Movie, M1 & Me
ဖိုးစိန် said on May 3, 2010 at 9:38 PM
ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ကြည့်ရတဲ့ အရသာကို မကြိုက်ဘူး။
ဒါပေမယ့် လူများများစုသွားပြီး ဝေးလားဝါးလားလုပ်ရတာကိုတော့ကြိုက်တယ်။ ပြီးရင် ရုပ်ရှင်ဘာကားမှန်းဆိုတာမသိလိုက်ဘူး။
ဒါပေမယ့်ရုပ်ရှင်မက်တဲ့အထဲမှာ ကျနော်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းကို ကြည့်တတ်တာ။
မမင်း said on May 3, 2010 at 10:20 PM
မမေးဘူး၊ မမေးဘူး။ ထင်ချင်ရာထင်လိုက်ပါ့မယ်။ ခွိ။
အိမ့်ချမ်းမြေ့ said on May 3, 2010 at 10:47 PM
ဘယ်သူလည်းဟင်.. ဇွန်???? :P
Ree Noe Mann said on May 3, 2010 at 11:35 PM
Rita said on May 4, 2010 at 7:23 AM
မမေးနဲ့ဆိုမှ မေးဖို့ သတိရသွားတာ။
မိုးခါး said on May 4, 2010 at 8:05 AM
မမေးနဲ့ဆို ထင်ချင်သလို ထင်ပစ်လိုက်မှာနော် .. ဟွင်းဟွင်း .. :P
sonata-cantata said on May 4, 2010 at 10:33 AM
အော် M1 က ရုပ်ရှင်လက်မှတ်တွေ အဲ့လိုရတယ်လားး)
noblemoe said on May 4, 2010 at 12:38 PM
မမနော် အမြန်နှုန်းနဲ့ ပြေးနေပြီပေါ့တစ်ပတ်ပဲမတွေ့ တာ ဒီလောက်ပြောင်းသွားပြီလားဟင်းp
ရုပ်ရှင်ဆိုလို့ စလုံးမှာ ရှားရှားပါးပါးတစ်ခါတည်းပဲကြည့်ဖူးပါတယ်အမရယ် မျက်မှန်ကြီးတပ်ပြီးတော့လေ 3D ဆိုလား 4Dဆိုလားပဲ
အပြုံးပန်း said on May 4, 2010 at 7:16 PM
အဲဒီလိုလေး ရီဒင်းလုပ်ပြီး တခုခုရတာ ပျော်စရာ တမျိုးနော်၊
The last song လေးကို စိတ်ဝင်စားတယ်၊
ဒါပေမယ့် အိုင်ပီမင်းပဲ ကြည့်ဖြစ်လိုက်တယ်။
အင်ကြင်းသန့် said on May 5, 2010 at 6:14 PM
နောက်မှ လာမပြောပြနဲ့ ဟွန်းးးးးးးးးး (ကောက်သွားပါသည်)
TZA said on May 16, 2010 at 1:05 PM
အိုကေ အိုကေ.. သူများလာမေးရင် ကိုယ်ပါ လို့မပြောတော့ဘူး..